FlightGear ပျံသန်း Simulator ကိုပု FlightGear စီမံကိန်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး open-source ကို, အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Simulator ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအလွှတ်ပေးရန် 1997 ၌ရှိ၏နှင့်ယခုအထိထုတ်ပြန်အများကြီးရှိခဲ့သည်။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း FGFS အလွန်ကောင်းသောနှင့်လက်တွေ့ Simulator ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Simulator ကိုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်အတူ, အဲဒါကိုဆက်စပ်အရာအားလုံးကိုလည်း download, သုံးပါနှင့်ထပ်မံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်သင်ကအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုလျှင်, သင်အရာရှိတစ်ဦး FlightGear ကို web site ကိုမှာလုပျနိုငျ, www.flightgear.org .
သူတို့ထဲက 400 ထက်ပိုအမျိုးမျိုးသောလေယာဉ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အဓိကနေရာ, ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါသည်: github.com/FGMEMBERS .
ရှုခင်းဝဘ် site ပေါ်တွင်ဒါမှမဟုတ် Simulator ကိုအတွင်း TerraSync system ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ PC မှာ၏တနျခိုးပေါ် မူတည်. , သင်က default နှင့် HD ကိုရှုခင်းအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
FlightGear ကိုလည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် multiplayer ကွန်ယက်ကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းမျှမတက်ကြွကို virtual လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် VATSIM သို့မဟုတ် IVAO တူသောကြီးမားသော MP ကွန်ရက်များအဘို့အဘယ်သူမျှမထောက်ခံကြောင်း။
ခေါင်းစဉ်ဖြင့်,2ပတ် 1 ရက်အကြာကစတင်ခဲ့သည် WilliamMag
နောက်ဆုံးရေးသားချက်2weeks 1 day ago
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by WilliamMag
2 ပတ် 1 နေ့ကလွန်ခဲ့သည့်
0.136 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်